३ हजारले दिए म्यादी प्रहरीमा आवदेन » खबरहरुको एउटै केन्द्र
३ हजारले दिए म्यादी प्रहरीमा आवदेन
बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ १०:२२ मा प्रकाशित !
१७ चैत​, लुम्बिनी। लामो समयको अन्तरालपछि हुन लागको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा रुपन्देहीमा म्यादी प्रहरीका लागि फाराम भर्नेहरुको भीड लागेको छ । प्रहरीले निर्वाचनका तयारीका लागि थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला जिल्लामा म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन फाराम माग गरेसँगै रुपन्देहीमा फाराम भर्नेको घुइँचो लागेको हो ।
बीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गर्न म्यादी प्रहरीले धमाधम फाराम भरिरहेको रुपन्देही प्रहरीले जनाएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचनको विरोध गरेपनि यहाँका युवाको म्यादी प्रहरीमा निकै आकर्षण बढेको देखिएको छ ।
शनिबारदेखि सुरु भएको भर्ना अभियानमा आज दिउँसोसम्ममा ३ हजार जनाले फाराम भरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता डिएसपी वेल बहादुर पाण्डेले जानकारी दिए ।
रूपन्देहीमा फाराम भरेकाहरुमा ६० प्रतिशत मधेसी समुदायका युवायुवती छन भने ४० प्रतिशत पहाडिया समुदायका छन ।
म्यादीमा फाराम भरेकामध्ये पूर्वप्रहरी, पूर्व म्यादी प्रहरी, पूर्व नेपाली सेना र भारतीय सेनाका जवान रहेका छन ।
म्यादीमा फाराम भर्न आएकामध्ये अधिकांश आइए तथा केही बिए र एमए पढ्दै गरेका विद्यार्थीसमेत रहेको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ । रुपन्देहीमा एक हजार पाँचसय जति म्यादी प्रहरीको आवश्यकता पर्न सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: खुल्ला ठाउँमा दिसा गरेको आरोपमा १७ पक्राउ
NEXT POST Next post: एन्टी रेबिज खोपको अभाव भएपछि सेवाग्राही समस्यामा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ १०:२२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ १०:२२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ १०:२२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ १०:२२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, चैत्र १७, २०७३ १०:२२